လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်မှုများ - Vondt.net
16 / 08 / 2016 /0 မှတ်ချက်/i အရည်အသွေးအဆောင်းပါးများ, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း/av ရေတံခွန်
စိတ်ဖိစီးမှု? ဤတွင်သင့်အားကြွက်သားတင်းမာမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်လျှော့ချရန်ကူညီသည့်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၆ ခုရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသူတစ် ဦး ဦး အားဝေမျှရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်အသက်တာ၌အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းများအတွက်ယောဂနှင့်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အသုံးဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်ဆန့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားခြင်းသည်တင်းမာသောကြွက်သားများနှင့်ခိုင်မာသောအဆစ်များကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအတွက်နေ့စဉ်မိနစ် ၂၀-၄၀ ကိုဘေးဖယ်ထားရန်ကြိုးစားပါ၊ ထို့နောက်သင်တိုးတက်မှုကြီးကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
ဒီယောဂကိုယ်ဟန်အနေအထားကအမြှေးပါးကိုထုတ်ပေးပြီးသင့်ရဲ့အစာအိမ်နဲ့ရှူရှိုက်ခွင့်ရတယ်။ သင်၏အစာအိမ်နှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာအနားယူခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သင်၏နှာခေါင်းမှတဆင့်အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ ထို့နောက်သင်၏ပါးစပ်မှတဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူပါ။ အသက် ၃၀-၄၀ ကျော်ကိုပြန်ပြောပါ။
တင်ပါးနှင့်ထိုင်ခုံများတွင်ရွေ့လျားမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အပန်းဖြေယောဂအနေအထား။ အထူးသဖြင့်အနိမ့်ကျောကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ အလွယ်တကူဆန့်နိုင်သည့်အနေအထားကိုရှာပြီး ၃-၄ စုံမှထပ်မံမပြုလုပ်မီစက္ကန့် ၃၀ တွင်ကိုင်ထားပါ။
၃။ Uttana Shishosana
သင်အမှန်တကယ်တင်းမာမှုနှင့်တင်းမာမှုကိုလွှတ်ပေးနိုင်သည့်ယောဂအနေအထား။ ၎င်းသည်နောက်ကျောတစ်ခုလုံးကိုအောက်ပိုင်းမှလည်ပင်းသို့ကူးပြောင်းသည်အထိတိုးချဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးသိသောကြွက်သားများသည်ကောင်းသောလမ်းဖြင့်ဆန့်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒါဟာဆန့်နှင့်အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်နှစ် ဦး စလုံးပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ဒူးထောက်ပါ။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဆန့်နေသောလက်များဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ကျစေပါ။ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အလွယ်တကူဆန့်နိုင်သည့်အနေအထားကိုရှာပြီး ၃-၄ စုံမှထပ်မံမပြုလုပ်မီစက္ကန့် ၃၀ တွင်ကိုင်ထားပါ။
၄။“ နည်း ၅ နည်း” (အသက်ပြင်းပြင်းရှူနည်း)
ပထမအခြေခံနက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူခြင်းနည်းပညာ၏အဓိကနိယာမမှာတစ်မိနစ်လျှင် ၅ ကြိမ်ရှူရှိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်နည်းလမ်းမှာအသက်ပြင်းပြင်းရှူ။ ၅ ကိုရေတွက်ခြင်းမပြုမီအကြီးအကျယ်မပြင်းထန်ခင်ကြိမ်ဖန်များစွာမရေတွက်ပါနှင့်။ ၅။ နည်းစနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်သူများက၎င်းသည်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါပိုပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း။ ဒီအသက်ရှူနည်းကို Sukhusana နှင့်အတူယောဂအနေအထားနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Viparita Karani သည်ယောဂကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်ပြီးလည်ပင်းနှင့်နောက်ကျောဖိအားကိုဖယ်ရှားပေးပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းမွန်စွာအနားယူစေသည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းတင်ပါးဆုံရိုးတည်ငြိမ်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ယောဂဖျာနှင့်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုသုံးပါ။ သင့်အတွက်မည်မျှဆန့်တန်းကျသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်သည် - နံရံနှင့်အကွာအဝေးနှင့်ခြေထောက်တို့၏ထောင့်ကိုစမ်းသပ်ပါ။ သင်၏ပခုံးနှင့်လည်ပင်းအားကြမ်းပြင်သို့ပြန်ကျစေသကဲ့သို့သင်၏ခြေထောက်များကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ ညင်ညင်သာသာသင့်လည်ပင်းကိုဆွဲထုတ်။ လက်များကိုသင်၏လက်များအပေါ်သို့ပြန်ကျစေပါ။ ဒီအနေအထား 5-10 မိနစ်ခန့်ကိုင်ထားပါ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအသက်ရှူနှင့်ထိန်းချုပ်နေစဉ်။
လည်ပင်းနှင့်ပခုံးတွင်တင်းမာမှုကိုလျော့ချပေးသည့်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်း။ လေးခုလုံးကိုမတ်တပ်ရပ်ပြီးထိုင်ခုံကိုမျက်နှာကြက်သို့ဖြည်းဖြည်းမြှောက်လိုက်ပါ။ ဒီအနေအထားကိုစက္ကန့် ၃၀-၆၀ လောက် (သို့မဟုတ်တတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး) ဆုပ်ကိုင်ထားပြီးမြေပြင်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်ပခုံးတဝိုက်မှန်ကန်သောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကြွက်သားများကိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်သက်ဝင်စေသည်။ 30-60 စုံကျော်ပြန်လုပ်ပါ။
၎င်းလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်နေ့စဉ်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်သင့်သည့်ကောင်းမွန်သောယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သော်လည်း hectic weekdays များသည်အမြဲတမ်းဤအရာကိုခွင့်မပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
အားလုံးကမင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ အစအ ဦး ၌သင့်အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေပြီးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်သော်လည်းအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်ရောဂါရှိပါကဤလေ့ကျင့်ခန်းများကသင့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သလားကိုသင့်အားဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကြမ်းတမ်းသောမြေအနေအထားသို့သွားရန်သင်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများနှင့်မျှဝေပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲပါတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပို့ပေးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်လိုလားလျှင်၊ ကဲ့သို့ နှင့် Facebook စာမျက်နှာ get မှတဆင့်အဆက်အသွယ်ရ ဒီမှာ။ သင့်မှာမေးခွန်းများရှိရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ်သင်၏ပြissueနာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်တိုက်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးပါ။
နောက်စာမျက်နှာ \_ t - လည်ပင်း၌နာကျင်မှု? ဒါကိုသင်သိသင့်တယ်။
အစမ်းကြည့်ပါ - - မကောင်းသောပခုံးများမှကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်း ၅
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ - - Sciatica ဆန့်ကျင်5လေ့ကျင့်ခန်း
အဖတ်: - ဒူးနာခြင်းအတွက်ထိရောက်သောစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ခန်း ၆ ခု
သင်သိပါသလား - - အအေးမိခြင်းဖြင့်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားများနာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သလား။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက် ဇီဝကမ္မဗေဒ အဓိကအားဖြင့်သဘာဝထုတ်ကုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် (သင်ဒီမှာမှာယူနိုင်သည်) သည်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အခြားအကြံပြုချက်များကိုလိုအပ်ပါက။
အဖတ်: - အားကောင်းတဲ့အရိုးတွေအတွက်ဘီယာတစ်ခွက်လား။ ဟုတ်ကဲ့!
ငါတို့တ ဦး တည်းရှိတယ် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်မှာ Ola နှင့် Kari Nordmann မှတဆင့်၎င်းတို့၏မေးခွန်းများကိုအဖြေရရှိနိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဝန်ဆောင်မှု ကြွက်သားကြွက်သားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ - သူတို့လိုချင်လျှင်လုံးဝအမည်မသိ။ ရာနှင့်ချီသောအကူအညီများရပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့တာဝန်မရှိဘဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:36စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း 6
1 ၏စာမျက်နှာ 34123>»